Ukuphucula ubukho bakho be-SERP kaGoogle ngezi ziQwengana eziTyebileyo | Martech Zone
NgoLwesibini, Januwari 26, 2021 NgoLwesibini, Januwari 26, 2021 Douglas Karr
Iinkampani zichitha itoni yexesha ukubona ukuba zikwindawo yokukhangela kunye nokuphuhlisa umxholo omangalisayo kunye neesayithi eziqhuba uguquko. Kodwa iqhinga eliphambili elihlala liphoswa yindlela abanokukhulisa ngayo ukungena kwabo kwifayile ye- iphepha lesiphumo seinjini yokukhangela. Nokuba usezingeni okanye awubalulekanga kuphela xa umsebenzisi ophendulayo enyanzelekile ukuba acofe.
Ngelixa isihloko esikhulu, inkcazo yemeta, kunye ne-permalink ingawaphucula loo mathuba… ukongeza ii-snippets ezityebileyo kwindawo yakho ezinokuthi ziqhube ngokucofa amaxabiso. Khawufane ucinge, umzekelo, ukhangela imveliso ethile kwi-intanethi kwaye uluhlu lwamagama akhoyo lukhona. Ukuba uphawu lwesiqingatha sendlela ezantsi kwephepha libandakanya umfanekiso, amaxabiso, ukufumaneka, okanye uphononongo… unganyanzeleka ukuba ucofe ungeniso kunolo lungentla.
I-SERP liphepha lokufika ngenjongo yokuphanda okanye yokuthenga. Inxalenye ephambili yesicwangciso-qhinga sakho sophendlo lwezinto eziphilayo kufuneka ibe kukuphumeza kunye nokuphucula ukubonakala kwakho kula maphepha eziphumo zophando… kunye oonomadudwane abatyebileyo ziindlela zakho zokwenza njalo.
Izixhobo zikaGoogle ezityebileyo zeSnippet
Ungabhekisela kuyo Schema.org malunga nendlela yokuphumeza ngokupheleleyo iziqwengana ezityebileyo- ngumgangatho osetyenziswa nguGoogle. Zintathu iindlela zokubandakanya le datha kwindawo yakho. ngokweGoogle:
IMicrodata Indawo evulekileyo yoluntu ye-HTML esetyenziselwa ukwakha idatha yolwakhiwo ngaphakathi komxholo we-HTML. Njenge-RDFa, isebenzisa iimpawu zethegi ye-HTML ukubiza iipropathi ofuna ukuziveza njengedatha eyakhiweyo. Ihlala isetyenziswa emzimbeni wephepha, kodwa inokusetyenziswa entloko.
I-RDFa Ulwandiso lwe-HTML5 oluxhasa idatha edibeneyo ngokwazisa ngeempawu zethegi ye-HTML ezihambelana nomxholo obonakalayo womsebenzisi ofuna ukuwuchaza kwiinjini yokukhangela. I-RDFa isetyenziswa ngokubanzi kuzo zombini iintloko kunye namalungu omzimba kwiphepha le-HTML.
Vavanya iziQwengana zakho ezityebileyo
Iziqwenga zikaGoogle ezityebileyo
Ukuthengisa uMojo ubonelele ngolu luhlu lwee-Google Rich Snippets kwi-infographic yabo, Iindlela ezili-11 zokuSebenzisa iziQwengana eziTyebileyo zikaGoogle ukuphucula iZiphumo zakho zokuKhangela. Nalu uluhlu lwezinto ezityebileyo:
Reviews -Inokusetyenziselwa ukubonisa uphononongo kunye nokulinganiswa kwemveliso okanye amashishini kwiziphumo zokukhangela.
Recipes -Inokusetyenziselwa ukubonisa ezinye iinkcukacha malunga neresiphi, ezinje ngezithako, ixesha lokupheka, okanye iikhalori.
abantu -Iinkcukacha ezinje ngendawo, isihloko somsebenzi, kunye nenkampani inokuboniswa kwisiphumo sophando lomntu ngamnye-kubandakanya igama labo lesidlaliso, ifoto kunye nonxibelelwano lwasentlalweni.
ishishini -Iinkcukacha malunga neshishini okanye umbutho ofana nendawo, inombolo yefowuni, okanye ilogo yazo.
iimveliso Amaphepha emveliso anokuthengiswa ukuze abonise ulwazi olufana nexabiso, ukubonelelwa, ukulinganiswa kwemveliso kunye nokufumaneka.
iziganeko Iziganeko ezikwi-Intanethi, iikhonsathi, imithendeleko, iinkomfa zinokubonelela ngeenkcukacha ngakumbi kubandakanya imihla, indawo, imifanekiso kunye namaxabiso etikiti.
umculo Ulwazi lomculi kubandakanya imifanekiso yabo, iialbham, kunye nefayile yeaudiyo ebethelelwe ukumamela.
yokuzonwabisa -I-thumbnail kunye neqhosha lokudlala linokuboniswa, lonyusa amaxabiso okucofa ngama-41%.
apps -Khuphela kunye nolwazi olongezelelweyo kwiiplatifti zesoftware kunye nokusetyenziswa kweselfowuni.
Iintyikrakra -Bonelela ngolawulo oluphezulu lwewebhusayithi yakho ukuze umsebenzisi wenjini yokukhangela akwazi ukunxibelelana nokunyuka kwinqaku elithile kudidi okanye kwicandelwana.
Ukuba ufuna ngenene ukubona ukujongwa kobunzulu kwii-snippets ezityebileyo-funda 28 I-Google snippets ezizityebi omele uyazi [isikhokelo + infographic]. UFrantisek Vrab wabhala isikhokelo esineenkcukacha ezimangalisayo kunye nekhowudi ethile, ukujonga kwangaphambili, kunye nolunye ulwazi oluluncedo.
I-28 i-Google Rich Snippets omele uyazi
Islippet enye eye yehliswa yi Ithegi yombhali. Ngelishwa (ngokoluvo lwam) ukuba uGoogle uyisusile le nto ndiyakholelwa ukuba inike abantu ukubonakala okungcono kumanqaku abawabhale kwiwebhu yonke.
tags: kwi-infographicjson-ldimicodataabanturdfaReviewsisityebi snippet infographicoonomadudwane abatyebileyoschemeischema markupinyokayokuzonwabisa